पहिरो पीडितको दशैँ त्रिपालमुनी ! – इन्सेक
जाजरकोट ०७७ कात्तिक ९ गते
‘दिनमा घामले पोल्छ । रातमा चिसोले सताउँछ । खाने अन्न छैन । भएको घर पहिरोले बगाएर लग्यो । विकल्प केही नभएपछि यही त्रिपालमुनी गुजरा चलाइरहेका छौँ ।’–बारेकोट गाँउपालिका–४ गोठगाँउ तलगाँउकी गोरी नेपालीले यो पिडा सुनाइरहँदा उहाँको गला अवरुद्ध भयो । आँखा रसाए ।
गत असार २५ को मध्यरातमा आएको पहिरोले घर बगाएपछि उहाँको ६ जनाको परिवार विस्थापित भएर नजिकैको जङ्गलमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेको छ । गाँउपालिका र अन्य सङ्घसंस्थाले राहत स्वरुप दिएको खाद्यान्नले केही समय जेनतेन चल्यो । भएको पाखोबारी सबै पहिरोले लग्यो । ‘घरमा कमाई गर्ने कोही छैनन् । अब के खाएर बाँच्ने हो ? पेट भरी खान पाएका छैनौँ । हामी त साह्रै समस्यामा पर्‍यौँ हजुर !’–गोरीले भन्नु भयो–‘पहिले घर भएको ठाँउ फर्कन सक्ने अवस्था छैन । कहिलेसम्म यसरी त्रिपालमै बस्नु पर्ने हो कुनै टुङ्गो छैन ।’
गोरी जस्तै १४ दलित परिवार अहिले पनि विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । पहिरोले केही घर बगाएको र केही बस्नै नमिल्ने गरी चर्किएपछि उनीहरू त्रिपालको साहारा लिन बाध्य भएका हुन् । केही समय विद्यालयमा बसेका उनीहरू अहिले जङ्गलमा बस्दै आएका छन् । विद्यालयमा पढाइ सुरू हुन थालेपछि उनीहरू जङ्गलमा त्रिपाल टाँगेर बस्न थालेका हुन् । विस्तारै चिसो बढ्दै छ । चिसोले बालबालिका बिरामी पर्न थालेका छन् । यसपाली त उनीहरुको दशैँ पनि त्रिपालमुनी नै बित्ने भएको छ ।
‘त्रिपाल भित्रै जमारा राखेका छौँ ।’–विस्थापित नैनबहादुर नेपालीले भन्नु भयो–‘मिठो मसिनो खाने, नयाँ लुगा लगाउने र घरमै बसेर टीकाटालो गरेर दशैँ मनाउने त सपना मात्र भयो । त्रिपालमै भएपनि पेटभरी खान पाए हाम्रो लागि त्यही दशैँ हुने थियो ।’
बारेकोटको पहिरोमा परी १४ जनाको ज्यान गएको थियो भने १ हजार ५६ परिवार विस्थापित भएका थिए । वर्षात् रोकिएपछि अन्य परिवार घर फर्किएपनि तलगाँउका १४ दलित परिवार घर फर्कन सकेका छैनन् । उनीहरूले सरकारसँग गास र बासको माग गरेका छन् । ‘हाम्रो बस्ने ठाँउ पहिरोले सवै बगाएर लग्यो । हामीलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो ।’–विस्थापित गोपाल कामीले भन्नु भयो–‘हाम्रो समस्या भनेकै गास र बासको हो ।’ चिसोले ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई सताउन थालेको छ । पोषणयुक्त आहारको अभावमा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिन थालेको छ । विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापनाका लागि गाँउपालिकासँग स्रोत साधनको अभाव भएकोले प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको गाँउपालिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिलाई बताउनु भयो ।